Assassination Nation (2018) | MM Movie Store
Rating6ရရှိထားတဲ့ စျောခြောခြောလေးတှပေါဝငျထားတဲ့အကျရှငျကားလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ…လီလီတို့ သူငယျခငျြးလေးယောကျဟာ ဆီလမျမွို့လေးမှာ ကြောငျးတကျနတေဲ့ဆယျကြျောသကျမိနျးခလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။
တဈနမှေ့ာတော့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ဆီလမျမွို့ မွို့တျောဝနျရဲ့ အတှငျးရေး၊မကျဆခြေျ့နဲ့ ဓာတျပုံတှဟော ဟကျကာတဈယောကျရဲ့ လကျခကျြကွောငျ့ အငျတာနကျပျေါမှာ ပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ လူတှရေဲ့ ဆူပူမှုတှဖွေဈပျေါလာခဲ့ပွီးသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာပဲ မွို့တျောဝနျဟာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျသသှေားခဲ့ပါတယျ။
ထိုဖွဈရပျကွောငျ့ ဆီလမျမွို့လေးဟာ တုနျလှုပျနတေုနျးမှာပဲ အထကျတနျးကြောငျးအုပျရဲ့လူသိမခံနိုငျတဲ့ အတှငျးရေးအခကျြအလကျတှဟောအငျတာနကျပျေါမှာ ထပျမံပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။မွို့သူမွို့သားတှရေဲ့ အုံကွှမှုတှကေ ပိုမိုမြားပွားလာခဲ့ပွီးဆူပူလှုပျရှားမှုတှလေညျး စတငျဖွဈပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဟကျကာသမားရဲ့ ပဈမှတျက လီလီဖွဈလာတဲ့အခါမှာတော့ဘယျလိုတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲ၊ဟကျကာသမားကကော ဘယျသူဖွဈနမေလဲ၊ဆီလမျမွို့လေးကော ဘယျလိုအခွအေနနေဲ့ ကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာစိတျဝငျစားဖို့ အရမျးကောငျးတာမို့ ကွညျ့ရှုအားပေးကွပါဦးဗြာ….
Rating6ရရှိထားတဲ့ စော်ချောချောလေးတွေပါဝင်ထားတဲ့အက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…လီလီတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ဟာ ဆီလမ်မြို့လေးမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းခလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆီလမ်မြို့ မြို့တော်ဝန်ရဲ့ အတွင်းရေး၊မက်ဆေ့ခ်ျနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေရဲ့ ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲ မြို့တော်ဝန်ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဆီလမ်မြို့လေးဟာ တုန်လှုပ်နေတုန်းမှာပဲ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ရဲ့လူသိမခံနိုင်တဲ့ အတွင်းရေးအချက်အလက်တွေဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ အုံကြွမှုတွေက ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပြီးဆူပူလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဟက်ကာသမားရဲ့ ပစ်မှတ်က လီလီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ဟက်ကာသမားကကော ဘယ်သူဖြစ်နေမလဲ၊ဆီလမ်မြို့လေးကော ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းတာမို့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးဗျာ….
Lan Kwai Fong2(Link 1)